တကယ့်ဆိုလိုရင်းကိုနားမလည်နိုင်တဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတို့ရဲ့ ငြင်းဆိုနည်း !! - JAPO Japanese News
တကယ့်ဆိုလိုရင်းကိုနားမလည်နိုင်တဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတို့ရဲ့ ငြင်းဆိုနည်း !!
ကြာ 19 Nov 2020, 10:20 မနက်
ဤအကြောင်းအရင်းရဲ့အဓိကအချက်ကတော့ စကားလုံးတစ်လုံးအား ကောင်းတာရော မကောင်းတာရော နည်းလမ်းနှစ်မျိုးလုံးဖြင့်အသုံးပြုနိုင်လို့ပါပဲ။
ဤသည်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြစ်စေတာကတော့ တိုက်ရိုက်ငြင်းဆန်(သို့မဟုတ်)ငြင်းပယ်တာဟာ ရိုင်းစိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရလဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်လူမျိုးတော်‌တော်များများဟာ ဒီမတူညီတာကို နားလည်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့်၊
ဒီလိုရှုပ်ထွေးတဲ့ဂျပန်စာကိုတန်းစီပြီး နားလည်ဖို့ကြိုးစားကြည့်မယ်။ခေါင်းရှုပ်သွားရင်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။
သူ့ရဲ့မူလအဓိပ္ပာယ်က အံ့သြစရာကောင်းသည်ဟုဆိုလိုသော်လည်း ယခုအခါမှာတော့၎င်းကို ငြင်းပယ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့စကားလုံးအဖြစ်သုံးပါတယ်။အကယ်၍ သင်ဟာ အလုပ်ခွင်၌တစ်ခုခုရောင်းတဲ့အခါ ဝယ်သူက “ 結構です” လို့ပြန်ပြောပါက ၎င်းကိုမလိုအပ်ဘူး၊ မဝယ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
ဤဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ “ ဒါဟာအရမ်းကိုအံ့သြစရာကောင်းပေမယ့်၊ တကယ်တမ်းက အဲဒါကိုငါမလိုအပ်ဘူး” ဆိုတာကနေ ဆင်းသက်လာတာကြောင့်လို့တွေးမိစေပါတယ်။အတိုချုပ်လွန်းသွားသောကြောင့်မထင်ရလောက်အောင် အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းသွားတာနော်။
လူငယ်ဘာသာစကားမူလအဓိပ္ပာယ်ကတော့ အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပြီး ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်မကြာခဏဆက်စပ်မှုမရှိသော်လည်း ယနေ့ခေတ်မှာတော့ လူအများက [やべぇ]　yabe ဟူသောစကားလုံးကိုပိုမိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။
အရသာရှိတဲ့အစာကိုစားမယ်ဆိုရင် “マジやべぇ” maji yabe “အရမ်းဆိုးတယ်” လို့ထင်စေမိပေမယ့် (マジဆိုတာက တကယ် လို့ဆိုလိုတာပါ။)
လှပသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုမြင်လိုက်လျှင် “ マジやべぇ、かわいいな”
အကယ်၍ အမှားတစ်ခုခုပြုလုပ်ပြီးရဲ၏ဖမ်းဆီးခြင်းခံရလျှင်လည်း マジやべぇ
အကယ်၍ သင်သည်အိပ်ယာထနောက်ကျသွားပြီဟုထင်လျှင်ပြောတဲ့အခါ マジやべぇ
ဒီစကားလုံးကဘာလဲနော်? ထိုကဲ့သို့သောကြမ်းတမ်းတဲ့အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ ပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်တာတွေတော်တော်များသားပဲနော်?
အင်္ဂလိပ်လိုပြောရမယ်ဆိုရင်ရော ? မကြာခဏမေးခွန်းအမေးခံရပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ခြေအနီးဆုံးတူညီတဲ့အရာကတော့ Fuckin ‘, ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။
やべぇ、かわいい　→　Fuckin’ pretty！
やべぇ、寒すぎ　→　Fuckin’ cold!
အကယ်၍ သင်၎င်းကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုပါကခေါင်းမကောင်းတဲ့သူလို့အထင်ခံရမှာစိုးလို့ သတိထားပါနော်။
[“今度会おうね ” ]
သင်အမှန်တကယ်ထပ်မံတွေ့ဆုံချင်သည့်အခါမှာရော နောက်ထပ်မဖိတ်ပါနဲ့တော့လို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာရော အသုံးပြုပါတယ်။
ဒါကို ဂျပန်လူမျိုးတွေတောင် တကယ်နားမလည်ကြဘူး။
သူတစ်ပါးကိုနားမလည်စေရန်နှင့် သူတစ်ပါးကိုမနာကျင်စေရန်အသုံးပြုသောစကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်ပြီး သင်နားမလည်ခြင်းမှာလည်းသဘာဝကျနိုင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ဘယ်တော့တွေ့မှာလဲ လို့ထပ်မေးတဲ့အခါ ဝေဝါးပြီးထိုစကားလမ်းကြောင်းကိုလွှဲသွားပြီဆိုရင်တော့ ထပ်မဖိတ်ပါနဲ့လို့ ပြောချင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေများသွားပါပြီ။
အကယ်၍ သင်ဟာ ဂျပန်စာကိုသင်ယူနေတဲ့သူဆိုရင် ဒီနေရာမှာတော်တော်လေးရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ငြင်းဆန်တာလား လက်ခံတာလားဆိုတာကို စကားပြော မတိုင်မှီနှင့်အပြီးတွင် စကားလုံးများနှင့်မျက်နှာများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လားသို့မဟုတ်ဆိုးသောအဓိပ္ပာယ်လား ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
花札(はなふだ) ( ဟနဖုဓ ) ဂိမ်းကနေ ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ဂျပန်စကားလုံးများ